कोरोना भाइरसले अझै २ वर्ष विनाश मच्चाउने विज्ञ`को दावी, यी कारणले गर्दा हराउने छैन , पुरा पढ्नुहोस! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोना भाइरसले अझै २ वर्ष विनाश मच्चाउने विज्ञ`को दावी, यी कारणले गर्दा हराउने छैन , पुरा पढ्नुहोस!
अमेरिकी शोधकर्ताहरुले एक नयाँ अध्य`यनमा कोरोना`भाइरस म`हामा`रीको प्रकोप आउँदो १८ महिना देखि २४ महिना सम्म काय`मै रहने अनु`मान गरेका छन् । विज्ञहरुले विश्व`भरका सरकारलाई यो महा`मा`री बेला`बेलामा फ`र्किने स्थितिको लागि तयार रहन सचेत बनाएका छन् । अमेरिकाको मिन्ने`सोटा युनिभर्सिटीको सेन्टर फर इन्फे`क्सियस डिजिज रिसर्च एण्ड पोलि`सीको तर्फबाट कोभिड १९ भ्यूप्वा`इन्ट नाम`बाट गरि`एको यो अध्य`यन यसअघि इन्फ्लु`एन्जा महा`मा`रीले देखा`एको प्याट`र्नमा आधारि`त छ ।
सन् १७००को सुरुवातपछि अहिलेसम्म विश्वमा ८ इन्फ्लु`एन्जा महा`मा`री देखिएका थिए । यीमध्ये ४ महा`मा`री १९०० पछि देखिएका थिए । शोधकर्ताहरुका अनुसार सा`र्स र म`र्सको प्रकृति भन्दा अहिले देखिए`को सा`र्स सी.ओ.भी. २ को प्रकृति निकै फरक छ । अध्ययनका अनुसार अहिले कोरोना भाइरसको प्याथोजोन हेरेर यस विषयमा कुनै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।
इन्फ्लुएन्जा भाइरस र कोभिड १९ बीच अन्तर हुँदा हुँदै पनि धेरै समान`ताहरु छन् र यो कुरा वैज्ञानिकहरु पनि मान्छन् । दुवै मुख्य रुपमा श्वास नली`बाट फैलिन्छन्, दुवै भाइरस बिना लक्ष`ण पनि फैलिन्छन्, दुवै लाखौंलाई संक्र`मित गर्न र विश्वभर फैलिन स`क्षम छन् र दुवै नोभेल भा`इरस प्याथोजनहरु हुन् । कोभिड १९ र इन्फ्लु`एन्जाको इपिडिमि`योलोजी (म`हामा`री विज्ञान)मा अहम समानता र विविध`ताहरुलाई पहिचान गरेर को`भिड १९ का केही सम्भा`वत परिदृ`श्यको अनु`मान गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
पछिल्ला महा`मा`री`हरुको आधारमा शोधकर्ताह`रुले कोरोना`भाइ`रसका ३ सम्भा`वित परिदृ`श्यको अनुमान गरेका छन् । नोभेल कोरोना`भाइरसको इन्क्युबे`सन पिरियड इन्फ्लु`एन्जाको भन्दा धेरै छ । यसको बेस रिप्रो`डक्सन नम्बर पनि इन्फ्लु`एन्जाको भन्दा बढी छ । मौसमले पनि पछिल्ला महा`मा`रीमा खासै असर गरेको देखिएन । पहिलो परि`दृश्य अनुसार शोध`कर्ताहरुले २०२० को बसन्त ऋ`तुमा कोभिड १९ को पहिलो उच्चतम प्रकोपपछि गर्मीमा केही साना साना लहर आउने अनुमान गरेका छन् । यो सिलसिला १ देखि २ वर्षसम्म चल्नेछ । यी लहर स्थानीय फ्याक्टर, भूगोल र रोकथामका लागि अपनाइ`एका उपायमा निर्भर रहनेछन् ।
दोस्रो परिदृश्यमा २०२० को पतझड वा जाडो लाग्ने बेला दोस्रो र निकै ठूलो लहर आउन सक्छ । त्यसपछि अर्को वर्ष एउटा वा एकभन्दा बढी साना लहर आउने अनुमान छ । यो स्थितिमा पतझ`डको दौरान रोकथा`मका प्रभा`वकारी उपायको आव`श्यकता हुन्छ । यस्तै परिदृश्य १९१८–१९, १९५७–५८ र २००९–१० महामारीको पनि थियो ।
तेस्रो परिदृ`श्यमा २०२०को बसन्तमा कोभिड १९ को पहिलो लहरपछि केसहरु आउन विस्तारै बन्द हुनेछ । शोध`कर्ताहरुले इन्फ्लुए`न्जामा कुनै लहर प्याटर्न नदेखिएको भए पनि कोभिड १९ को हकमा यस्तो भन्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य अधिकारी`हरुलाई दोस्रो परिदृश्इको लागि तयारी गर्न सुझाव दिएका छन् । यो सबै`भन्दा खराब स्थिति हो ।
कोरोना भाइरस हामी-सँग लामो समय रहन्छ : डब्लू.एच.ओ.
ज’नता’लाई को’रो’ना’को डर, स’रका’रला’ई चा’हि’यो कर !